HomePod mini waxaa horey loogu iibiyay Austria, Ireland iyo New Zealand | Waxaan ka socdaa mac
Ugu dambeyntii iyo ka dib markii lagu dhawaaqay Apple maalmo ka hor, shirkadda Cupertino sii daayay HomePod mini ee Ireland, Austria iyo New Zealand intii lagu jiray subaxnimadii shalay ee Talaado Juun 15.
Shaki kuma jiro in waxa ugu xiisaha badan ee ku saabsan mini-HomePod mini-ga uu yahay set loo fidiyay adeegsadaha Apple inta udhaxeysa tayada codka, iswaafajinta iyo qiimaha. Waana in qalabkani uu dhaafsiisanyahay inuu noqdo hadal fudud oo naqshad qurxoon leh, maadaama ay bixinayso suurtagalnimada noqoshada kaaliyaha ugu fiican guriga mahadsanid sida ay ula jaanqaadayso HomeKit iyo kaaliyaha Siri.
‌HomePod mini‌ waxaa si rasmi ah loo bilaabay bishii Oktoobar ee sanadkii hore ee 2020 dalal dhowr ah oo aan ka mid nahay dalalka Spain, Mareykanka, Australia, Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Hong Kong, Hindiya, Japan iyo Boqortooyada Ingiriiska. Shirkadda Cupertino ayaa ku dhawaaqday in inta lagu guda jiro bishan waddamo kale la bilaabi doono haddana waxay gaarayaan Austria, New Zealand iyo Ireland.
Markii ay Apple bilawday HomePod isticmaaleyaal badani waxay filayeen imaatinka moodal yar oo qiimo aad u hooseeya ugu dambayntiina shirkadda Cupertino waxay soo saartay miniPodkan yar Runtii waa hadl xiiso leh qiimahiisa iyo cabirkiisa laakiin caqli ahaan looma barbardhigi karo codka walalkiisa ka weyn. Tayada codka waa fiican tahay, laakiin kuma aanan dhowaan in aan la socdo HomePod-kii asalka ahaa. Si kastaba xaalku ha ahaadee, waa iibsi aad u wanaagsan haddii aad u baahan tahay inaad Siri ku haysato guriga sidoo kalena aad rabto inaad dhageysato Apple Music-kaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » HomePod mini waxaa horey loogu iibiyay Austria, Ireland iyo New Zealand
Waxaan u dhownahay inaan aragno dhoobada dhoobada ah ee 'Apple Watch Series 5' oo madow ah